स्मार्ट जेब्रा क्रसिङ बनाउँदै कामपा, ट्राफिकले हात हल्लाएर गाडी रोक्नु नपर्ने | गृहपृष्ठ
Home समाचार स्मार्ट जेब्रा क्रसिङ बनाउँदै कामपा, ट्राफिकले हात हल्लाएर गाडी रोक्नु नपर्ने
on: December 20, 2018 समाचार
पुस ५, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मार्ट जेब्रा क्रसिङ निर्माणको तयारी गरेको छ । अहिले कामपामा करीब १ सय स्थानमा परम्परागत जेब्रा क्रसिङ छन् । मानिसको आवागमनको हिसाबले उक्त संख्या अत्यन्तै कम हो भने भएका स्थानमा पनि धेरै नदेखिने अवस्थामा छन् । त्यसैले मानिसको अत्यधिक चाप हुने स्थानमा कामपाले स्मार्ट जेब्रा क्रसिङ निर्माणको तयारी गरेको हो ।
कामपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने, ‘यसअघि जे जस्तो निर्माण भएको भए पनि अब निर्माण गर्ने सबै जेब्रा क्रसिङ स्मार्ट नै हुन्छन् ।’ सडक विभागसँग सहकार्य गरी मासिनको आवागमन बढी हुने स्थानमा काम अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ निर्माण गरिने जेब्रा क्रसिङ आधुनिक किसिमको हुनेछ र दुवैतर्फबाट आउने गाडी दश मिटर अघि नै रोकिने छ । मानिस आएपछि ट्राफिक प्रहरीले हात हल्लाएर, सिठ्ठी बजाएर रोकिराख्नु पर्दैन, प्रविधिले नै रोक्छ ।
नयाँ निर्माणको कामसँगै यसअघि निर्माण भएका जेब्रा क्रसिङलाई रातको समयमा पनि स्पष्ट रुपमा देखिने गरी मर्मत गरिने कामपाले जानकारी दिएको छ । कामपाले चालू आव २०७५/७६ को लागि रू. १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न चालू आवमा रू. ४ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी महानगरभित्रका सडक विस्तार र मर्मतमा खर्च गरिने छ ।
कामपाभित्र करीब १ हजार ४५० किलोमिटर पक्की सडक छ । कामपालाई आठ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक मात्र मर्मतसम्भार गर्ने अधिकार छ । त्यसभन्दा माथिका सडकमा काम गर्न सडक विभागसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्दछ । कामपाभित्र आठ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक ९५० किलोमिटर छ । कामपाभित्र ६२ मिटर चौडाइका सडकसमेत छन् । रासस
तत्काल चाबहिल र पुरातत्व विभाग अगाडि मात्रै आकाशे पुल निर्माण हुने
व्यापारीले कब्जा गरेको खुल्लामञ्चमा चल्यो डोजर